Waa maxay Evolution? – Kaasho Maanka
Waa maxay Evolution? Maxay se tahay Aragtida Horumarka Noolaha (The theory of Evolution)?!
Evolution ama The theory of evolution waa qeyb ka mida Cilmiga Noolaha (Biology). Waa mowduuc gorfeeya xiriirka hidde (genetic), muuqaal, iyo askun ee ka dhexeeya dhammaan noolaha dunida ku nool. Cilmiga Evolution-ku ma aha mid gorfeeya sida ay nolosha (life) ku askuntay ama u ku timid, balse waa cilmi isku howla inuu muujiyo xiriirka ka dhaxeeya dhammaan noolaha dunida ku nool.
Evolution-ku wuxuu qaataa wakhti dheer si saamayntiisu uga muuqato noolaha, sidoo kale wuxuu qaadan karaa wakhti kooban, balse inta badan wuxuu qaataa wakhti aad u dheer. Tusaale horumarka iyo isbadelka ku dhaca Bakteeriyada qaarkeed wuxuu qaadan karaa maalmo kooban si ay Bakteriyadaas u noqoto noole ka duwan kii hore. Balse horumarka iyo isbadelka ku dhaca dhirta ama dadka wuxuu qaadan karaa boqolaal kun oo sano si loo dareemo inuu isbadel ku dhacay noolahaas.
Evolution-ka waxaa sababay dhowr walxood, waxaa se ugu muhiimsan inta hoos ku xusan:
Kala duwanaasho (Variation)
kala duwanaanta aynu ka hadlayno waa midda u dhexaysa hal noole sida dadka (la soco isma bar-bar dhigayno Labo noole ee waxaynu tilmaamaynaa oo qura kala duwanaanshaha hal noole).
Kala duwanaashahaas waa mid joogta ah sida kala duwanaanta dadku ku kala duwanyihiin dhererka iyo culayska, midna waa kala duwanaan aan joogta ahayn sida Labka iyo dheddigga.
Waxaa sababa kala duwananshaha hidde (genetic), tusaale; kala duwanaanta ay dadku ku kala duwanyihiin Dherarka waxaa sababay hidde ( Genetic factor). Sidoo kale kala duwanaanta waxaa sababa deegaanka (Environment), tusaale; culayska qofka waxaa saamayn ku yeelan kara cunnada uu cuno iyo hab nololeedka uu qofkaa ku nool yahay taasoo ah saamayn Deegaan (Environmental factor).
La qabsashada (Adaptation)
Dhammaan kala duwanaan walba oo ka dhex jirta hal noole ,haddii ay ahaan lahayd, dherer, midab, culays…iwm waxay ku khasabtaa noolahaasi inuu sameeyo la qabsi uu la qabsanayo deegaanka (Environment) si uu u bad-baado isaga iyo dhashiisa.
La qabsashadaas waxay noqon kartaa mid ah la qabsasho hab-dhaqameed (Behavioural adaptation) tusaale; Lo’da duur joogta ah waxay u nooshahay koox-koox, halkii koox waxay kor u dhaaftaa 100. Lo’daas duurjoogta ah uma noola hal-hal gooniya. Maxay tahay haddaba sababta ay lo’daas ugu nooshahay koox gaaraysa 100? Sababtu waxaa weeye haddii uu libaax soo weeraro kooxdaas waxaa yaraanaya halista libaaxaas.
Si aad u fahamto habka ay u yaraanayso halista libaaxa, waxaad is weydiisaa fursadda bad-baado ee ay hasato hal lo’ haddii uu libaax soo weeraro ? Waxaa hubaal ah in fursaddeeda bad-baado ay tahay 50% oo ka dhigan in libaaxu ayaa cunayo ama ay ka bad-baadayso. Balse haddii ay lo’daas ku dhex jirto 99 lo’ood fursaddeeda bad baado aad ayay u badanaysaa taasoo xisaab ahaan noqonaysa 99%, sidoo kale halista in la cuno aad ayay isku dhimaysaa oo waxay noqonaysaa 1% , sababtoo ah halistii in la cuno waxaa la qaybsaday 99 lo’ood. Tani waxaa la yiraahdaa Behaviour adaptation ama la qabsasho hab-dhaqameed.Laqabshadu waxa kale oo ay noqon kartaa mid ku timaadda jirka noolaha gudahiisa (Physiological and anatomical adaptations), tusaale; nibiriga wuxuu leeyahay baruur adag (fat) oo ka celisa in dhaxan uu u dhinto marka uu Badaha qabow gaaro.
Horumarka Nooluhu wuxuu qaataa wakhti dheer, sidoo kale wakhti gaaban ayuu qaadan karaa. Noolaha qaar ka mida isbadel degdeg ah hadduu ku dhaco deegaankiisa, waa uu dabar go’aa, balse qaar kale sida bakteeriyada qaar kamida oo la yiraahdo Staphylococcus aureus waxaa ku dhaca isbadel hidde. Isabadelka Hidde ee ku dhaca waxaa sababa isbadel ku yimaadda Deegaanka ay ku nooshahay.
Staphylococcus aureus waxay ku nooshahay gudaha noolaha dhiigga kulul sida Dadka, Lo’ da…iwm. Badanaa Staphylococcus aureus dadka wax dhibaato ah uma gaysato, balse sida aan horay u xusay deegaankeeda waa gudaha noole kale sida dadka.
Isticmaalka baahidu aysan keenin ee ay dadku isticmaalaan Anti-biotics ayaa isbadel u geystay Deegaankii Staphylococcus aureus ee ahaa gudaha dadka, kadibna waxaa ku dhacay isbadel hidde si ay ula qabsato isbadalka ku dhacay deegaankeedi.
Waagii hore qofku hadduu hargab ku dhaco dhaqaatiirtu waxay u qori jireen Anti-biotics, balse hadda dhaqaatiirtu siiba kuwa reer galbeedku qofka ilaa ay ogaadaan inuu u baahanyahay Anti-biotic uma qoraan, waxayna ku dadaalayaan inay yareeyaan isbadelka deegaan iyo midka hidde ee ku dhacaya Staphylococcus aureus, taasoo keeni karta in Staphylococcus ay noqoto mid la qabsata Anti-biotic kada, kadibna ay halis noqoto oo wax lagu daaweeyo la waayo mar haddii ay la qabsatay antibiotics kadii.
Tusaalahaas kore wuxuu caddayn u yahay in horumarka noolahu uu yahay mid dhaba oo la dareemi karo muddo kooban.
Kala duwanaanta uu halka noole kala duwanyahay (Variation) iyo La qabsashada uu nooluhu la qabsanayo deegaankiisa haddii ay socoto malaayiin sano, waxaa soo askuma noole cusub oo ka duwan kii hore.
Haddaba Dadku sidee bay u horumareen (evolution)?
Dadku waxay ka soo askumeen sida ay leedahay aragtida Horumarka Noolaha (Theory of Evolution) noole ka bad-baaday dabar go’ii ku dhacay noolihii noolaa xiligii Diinaasuur-ka (Dinosaurs), noolahaas oo ahaa naaslay (mammal) yar. Naasalaydaas yar ayaa waxaa ku bilowday kala duwanaansho (variation ) iyo La qabsasho (Adaptation) socday malaayiin sano, ilaa ay samaysmeen noolaayaal cusub.
Noolayaashaa cusub sidoo kala waxaa ku socday Variation iyo Adaptation socday malaayiin sano ilaa ay qaar kamid ah noqdeen noole cusub. Noolahaas cusub waxaa ka bad-baaday inta awooday inay la qabsato isbadalka joogtada ah ee ku socday deegaankiisa.
Inta badan dadka aan fahamsanayn waxa uu Evolution ku yahay, waxay la soo boodaan inuu yahay ”Dadku daanyeer bay ka yimaadeen!” Waxayna daliilsadaan muuqalka hoos ka muuqda. Muuqaalka hoose waxaa loogu talo galay kaliya in lagu muujiyo xiriirka hidde (genes), muuqaal, iyo hab dhismeedka jirka ee ka dhaxeeya dhamaan kooxda loo yaqaan Primates. Muuqaalku wuxuu muujinayaa kaliya in noole walba oo ka muuqda muuqaalka uu xiriir la leeyahay kan kale oo labadii isku dhowba xiriirkoodu uu yahay mid iskaga dhow kuwa kale ee ka fog. Muuqaalka loolama jeedo in mid ba midka kale ka farcamay, ee kaliya waxaa lagu muujinayaa xiriirka ka dhexeeya iyo sida ay iskugu dhowyihiin.
Afka Soomaaliga waa af la dayacay oo aan lahayn eray bixin badan, tusaale Primates-ka waxaa ay u kala baxaa boqolaal nooc, balse Soomaalida wax walba oo muuqaal dad leh balse aan ahayn dad waa u daanyeer. Taasina waa nasiib xumo.
Dunida islaam-ka waa meelaha wali Evolution-ka laga dafiro oo dadka intooda badan aysan fahamsanayn.
1970s waxaa ku batay dunida islaamka rag culimo isku sheegay oo dadka marin habaabiyay oo been ka sheegay Evolution-ka. Balse tobankii sano ee u dambaysay waxaa soo baxay rag dhalinyaro ah oo wadaado ah oo dadka fahamsiiyay waxa uu evolution-ku yahay iyo waxa ay ku diidan yihiin. Isku soo duub Evolution-ku ma aha wax lagu soo koobi karo maqaal, balse waa moduuc aad u ballaaran. Waxaan kula talin lahaa qof walba oo taageersan ama diidan Evolution-ka inuu marka hore baaro, oo uu akhriyo, iskuna dayo inuu fahmo, kadibna uu la doodo kuwa taageersan ama kuwa diidan.
W/Q: Bille Samatar 20th January 2017